Uchwepheshe we-Semalt uveza ukuthi iWeb Data Data Scraping yasungulwa kanjani nge-Court Ruling
Nakuba kungase kube mthethweni ukukhipha idatha kusuka kumawebhusayithi ngaphandle kwemvume ecacile kubanikazi besayithi, ijaji lisanda kubusa ngaphansi kwezimo ezithile. Ama-hiQ Labs asanda kufaka icala ngokumelene ne-LinkedIn ngokubavimbela ekukhipheni idatha kusuka kumakhasi e-LinkedIn.
Kwafika njengokushaqeka okukhulu kubantu abaningi ukuthi i-LinkedIn yatshelwa ukuthi inikeze ukufinyelela okukhululekile kokuqala kwamakhasi ayo wewebhu. I-hiQ isebenzisa ukuhlelwa kwayo kokubona lapho umsebenzisi we-LinkedIn efuna umsebenzi ngokususelwa ekushintsheni umsebenzisi okwenza kuphrofayela yakhe yomphakathi.
I-algorithms isebenzisa idatha ekhishwe kumawebhusayithi we-LinkedIn. Njengoba kulindelwe, i-LinkedIn ayiyithandi futhi izilinganiso zafakwa ukuze zivimbele i-hiQ ekudleni okuqhubekayo kwedatha. Ngaphandle kwezingqinamba zobuchwepheshe ezabekwe endaweni, izixwayiso zomthetho ezisemthethweni nazo zakhishwa futhi.
Ukuqala akuzange kube nokukhetha kodwa ukukhipha udaba ngokusemthethweni. I-hiQ kwadingeka ifune ukulungiswa ngokomthetho. Inkampani ifuna i-LinkedIn iyalwe ukuba isuse izithiyo zayo zobuchwepheshe. I-hiQ iphinde ifune inqubo ye-extraction yedatha ku-LinkedIn ngokomthetho.
Ngenhlanhla ngokuqala, ithole lokho ayifunayo. Isibambiso sasikusiza i-hiQ. I-LinkedIn yayalelwe ukuba isuse zonke izinyathelo ezivimbela i-hiQ ekuqaliseni i-LinkedIn (amakhasi ewebhu) futhi inikeze ngesandla samahhala njengento isemthethweni ngokuphelele. Ijaji liphikisana nesinqumo sakhe ngokuthi lokho i-hiQ efuna ukuyikhipha yidatha eye yaboniswa ukubuka komphakathi.
Ijaji alizange nje licele ummangalelwa ukuba asuse yonke indlela yokuvimbela eyayibekwa ngokumelene ne-hiQ, kodwa futhi wayala ukuthi ummangalelwa kufanele ashiye lezo zinto esikhathini esizayo.
Ukukhuthaza idatha evulekile yewebhu
Ngenkathi isinqumo sisengumyalelo wesikhashana, kuyathandeka ukuzwa ukuthi umthetho usekela idatha evulekile yewebhu nokufinyelela mahhala kolwazi kwi-intanethi njengoba lesi sinqumo siqinisekisa ukuthi. Ngisho noma isinqumo sokugcina samukela ummangalelwa, leli qiniso selisunguliwe kakade.
Ijaji lakhuthaza le nqubomgomo ngokuvala zonke iziphakamiso ze-LinkedIn. Ngesikhathi i-LinkedIn izama ukusungula ukuthi ummangalelwa wayephula umthetho wobumfihlo bakhe, ijaji lalingakaze ukuthi umsolwa uphinde adayise idatha.
Lapho impikiswano ingabambeli amanzi, ummangalelwa wabuye wathi isenzo sika-hiQ sasikwephulwa ngokweqile kweKhomishini yokuKwabanisa nokuThutha koMthetho (CFAA) ngoba ukuqala kwafinyelela amaseva abo ukuvuna idatha ngokungemthetho. Nakulokhu, le mpikiswano yahlushwa. Yenqatshelwe ukuthi i-hiQ ivele ibhala okuqukethwe emphakathini, amakhasi angavunyelwe.
Ijaji libalula icala njengoba umuntu ehamba esitolo esivulwe ngesikhathi samahora. Umuntu onjalo akanakusho ukuthi uyaphula umthetho. Ngakho-ke, i-hiQ yayingeyona iphutha. Ngokuthakazelisayo, ijaji laqhubeka lichaza ukuthi kungani isinqumo sakhe sithandwa umphakathi.
Ngamafuphi, inkantolo yamukele ukuthi kunesithakazelo somphakathi ukuvumela idatha ukuba ikhuni, ikhishwe futhi ihlaziywe. Ngakho-ke, kuyoba inqubomgomo eyingozi yokugqugquzela ukubekwa kwezingqinamba ekugeleza kokungena mahhala kolwazi.
Okufanele ufunde esinqumweni
Nakuba ungahle ube nezizathu zokukhipha idatha ngokuqondile ku-LinkedIn, kufanele ufunde esinqumweni. Kungcono ukudlala ephephile ngokufunda nokuhlonipha ama-robot. Ifayela le-txt lamawebhusayithi wonke. Khumbula, lesi sigwebo sisengumyalelo wesikhashana. Kungase kugcine kuhambelana ne-LinkedIn.
Nakuba lesi sinqumo singase singathinti ngqo, siyajabula ukuthi inkantolo yenhlangano igcizelela inqubomgomo yokugcina iwebhu ivulwe umphakathi. Ngakho, ulwazi kufanele lutholakale futhi lufinyeleleke kulabo abangasesha futhi balisebenzise kahle.
Idatha yeWebhu iyasiza kakhulu kuwo wonke umuntu, ikakhulukazi abahlaziyi bezindaba, abathuthukisi, ososayensi bemininingwane kanye nabanye abaqeqeshiwe. Ngakho-ke, lesi sinqumo siwukuthuthukiswa okumukelekile Source .